﻿Download Amathuluzi Okuhlola we-Microsoft Office 2013 - IsiZulu from Official Microsoft Download CenterWarning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow.See how to enable scriptsDownload CenterMenuSearchSearch Download Center
Isi-AlbaniaIsi-ArabhuIsi-ArmenianIsi-AssameseIsi-Azeri (EsiyisiLatini)IsiBasqueIsiBengali (isiNdiya)IsiBengali (saseBangladesh)IsiBhunu IsiBosnia (EsiyisiLatini)IsiBulgariaIsiCatalaIsiCroatiaIsiCzechIsiDanishiIsiDashiIsi-EstoniaIsiFinishiIsiFulentshiisiGaliciaIsiGeorgiaIsiGrikiIsiGujaratiIsiHausaIsiHebheruIsiHindiIsiHungaryIsi-IcelandIsi-IgboIsi-IndonesiaIsiJalimaneIsiJaphaneIsiKannadaIsiKazakhIsiKinyarwandaIsiKonkaniisiKoreaIsiKyrgyzIsiLatviaIsiLithuaniaIsiLuxembourgIsiMacedonia (saseMakhedoniya endala)IsiMalay (saseBrunei Darussalam)IsiMalay (saseMalesia)IsiMalayalamisiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiNepalIsiNgisiIsiNorway (esiyisiBokmat)IsiNorway (esiyisiNynrsk)IsiNtaliyaneIsi-OriyaIsiPanishiIsiPashtoIsiPediIsiPersiaIsiPholishiIsiPunjabiIsiPutukezi (saseBrazil)IsiPutukezi (sasePortugal)IsiRashiyaIsiRomaniyaIsiRomanshIsiSerbia (esiyisiCyril)IsiSerbia (EsiyisiLatini)IsiShayina (Esenziwe Lula)IsiShayina (Sendabuko)IsiSinhalaIsiSlovakIsiSloveniaIsiSwahiliIsiSwidiIsiTamilIsiTatarIsiTeluguIsiThaiIsiTswana (saseNingizimu Afrika)IsiTurkeyIsi-UkrainiaIsi-Uzbek (EsiyisiLatini)IsiVietnamIsiWelshIsiWolofIsiXhosaIsiYorubhaIsiZuluNgokwe-IrishScottish Gaelic - United KingdomSerbian (Cyrillic) - Bosnia and HerzegovinaUrdu - Pakistan
proofingtools_zu-za-x86.exe2.4 MB2.4 MB
proofingtools_zu-za-x64.exe2.6 MB2.6 MB
Uhlelo:2013Igama Lefayela: proofingtools_zu-za-x86.exeproofingtools_zu-za-x64.exeUsuku Ekhishwe Ngalo:07-01-2013Usayizi Wefayela: 2.4 MB2.6 MB
Ingabe ufuna ukuhlola isipelingi solimi olungafakwanga ngokuzenzakalea i-Office? Usendaweni elungile. Amathuluzi Okuhlola e-Microsoft Office afaka phakathi isethi ephelele yamathuluzi okuhlola atholakalayo e-Office kulolu limi. Vele ufake bese uqala phansi i-Office, namathuluzi okuhlola olimi lakho alungele ukuhamba.
Lokhu kulanda kusebenza nezinhlelo ezilandelayo: Microsoft Office Excel 2013 Microsoft Office OneNote 2013 Microsoft Office Outlook 2013 Microsoft Office PowerPoint 2013 Microsoft Office Word 2013
Ukuze ufake lokhu kulanda: Faka amathuluzi okuhlola: Landa ifayela ngokuchofoza ibhathini lokulanda (ngehla) futhi ulondoloze ifayela kwidiski lakho eliqinile.
Sebenzisa uhlelo lokumisa ngokuhlela.
Ekhasini le-Read the Microsoft Software License Terms, buyekeza imigomo, khetha ibhokisi "Click here to accept the Microsoft Software License Terms", bese uchofoze u-Qhubeka.
Iseluleki sokuhlelwa sisebenza futhi sifake amathuluzi okuhlola.
Ngemva kokuphela kokufaka, qala phansi izinhlelo zakho ze-open Office.
Imiyalo yokusebenza: Vele usebenzise amathuluzi njengoba ubuzokwenza - kufanele manje uwabone ngolimi lakho olusha okufakiwe. Isibonelo, ungasetha ulimi lakho lokuhlola kulimi olusha ukuze usebenzise ukuhlola isipelingi (uma sitholakala) - ukuze ufunde ukuthi ukwenza kanjani lokho, bona i-Shintsha phakathi kwezilimi ezahlukene ngokusetha ulimi lokuhlola Ukuze ususe lokhu kulanda: Kwimenyu yokuqalisa, khomba kuMasethingi bese uchofoze Iphaneli Yokulawula.
Chofoza kabili u-Engeza/Susa Izinhlelo.
Kuhlu lwezinhlelo ezifakiwe manje, khetha Amathuluzi Okuhlola eMicrosoft Office 2013 - [Ulimi] bese uchofoze u-Khipha, Susa, noma Engeza/Susa. Uma ibhokisi livela, landela imiyalo ukuze ususe uhlelo.
Chofoza u-Yebo noma KULUNGILE ukuthi ufuna ukususa uhlelo. Imithombo Ehlobene
Amathuluzi okuhlola Wamaphakethe Olimi e-Office: ukuqhathanisa